Force Sensor, Sensor de tension, Cell de Load - XJCSENSOR
Fampiharana Robotic Field
Fampiharana angovo vaovao
Nanomboka tamin'ny 2009,
vahaolana sy rafitra mpamatsy vokatra lehibe indrindra amin'ny indostria
Ohatra vaovao amin'ny fampiharana
Fampiharana ny saha Robotic
Sensor dia modely elektronika amin'ny robot manan-tsaina. XJCSENSOR's torque sensor miaraka dia ampiasaina amin'ny fiarahan'ny robot manan-tsaina. Izy io dia azo apetraka eo akaikin'ny clamp sy ny suction cup an'ny sandan'ny robot mba hanampiana ny robot hisoroka ny sakana, hanampy amin'ny famaritana ny zava-misy fa nianjera ilay zavatra voatazona nandritra ny hetsika, na azo apetraka amin'ny robot mandeha, ilay robot fiaraha-miasa, ary ny milina fanidiana hidin-trano.
Ny sensor XJC dia manana fampiharana marobe ao anaty fiara, ary miaraka amin'ny fampivoarana ny teknolojianay, ny sensor dia handroso tsikelikely, miaraka amin'ny habe kely, fahamendrehana ambony, fahatsapana avo, vahaolana avo lenta, vokatra nomerika sns.
XJC pressure sensor button type & S type dia ampiasaina mba hamantarana ny hery miady na tsindry apetraka na mahatanty ny kendrena, toy ny milina fanaovan-gazety, milina fanodinana fantsona avo lenta, milina fanandramana fitaovana, fitaovana mandeha ho azy ary rafitra fanaraha-maso mandeha ho azy fitaovana.
Miaraka amin'ny fampivoarana ny tsenan'ny fitaovana fitsaboana, ny fangatahana avo lenta dia apetraka amin'ny fampiasana ny tsindrona tsindry amin'ny sehatry ny fitsaboana. Ny tombony azo avy amin'ny avo lenta, azo itokisana, marin-toerana ary kely ny andiany D ao amin'ny XJCSENSOR dia tsy isalasalana fa ny ivon'ny fitaovam-pitsaboana. Ny fitaovana fampiharana mahazatra dia misy fandriana fitsaboana, paompy syringe, fitaovana fitsaboana amin'ny laoniny, robot fandidiana, fitaovana ultrasound B lavitra, sns.
Ny sehatry ny angovo vaovao dia tsy niroborobo firy. Ny fampiharana sensor Xin Jingcheng pressure amin'ny sehatry ny angovo vaovao dia misy: XJC-S08 & XJC-D150 dia ampiasaina amin'ny milina fananganana tsindry ho an'ny bateria fonosana malefaka, milina mafana sy mangatsiaka, milina mpamorona herinaratra; ny sensor amin'ny fihenjanana dia ampiharina amin'ny rivotra, milina lamba lamba; XJC-D01 dia ampiharina amin'ny fitaovana fanindronana ranoka, sns.
XJC sensor noho ny valiny haingana, vahaolana avo lenta, mora hanatrarana fandrefesana tsy mifandraika, avo lenta azo itokisana, ampiarahina amin'ny habeny, lanjany maivana, fanjifana herinaratra ambany ary fampidirana mora, mahomby amin'ny fahitana azy ara-potoana sy iatrehana olana. izay mora mitranga amin'ny asan'ny milina fambolena, ary afaka mampiroborobo ny fivelaran'ny milina fambolena ary miantoka ny milina fambolena. Azo itokisana ny fampiasana, mampihena ny fanjifana angovo, ary ny tahiry amin'ny mpiasa sy ny enti-manana.
XJC S sensor type pressure dia ampahany lehibe amin'ny indostria fampitaovana milina; ny fampiharana azy dia ahitana indrindra: ny voalohany dia ny fibaikoana ny fepetra miasa ny motera; ny faharoa dia ny fifehezana ny rafitra hydraulic; ny fahatelo dia ny fibaikoana ny fahombiazan'ny milina fanaovana injeniera amin'ny ankapobeny; Fiara fiaramanidina, vano, vano mitafo, vano, sns.
XJC D cell load cell dia ny sensor amin'ny tsindry be mpampiasa indrindra amin'ny fampiharana indostrialy. Ny fampiharana manokana dia ny fitaovana famonoana, ny fonosana, ny fandanjana ary ny fanasokajiana fitaovana sns.
XJC sensor no sensor torque be mpampiasa indrindra eo amin'ny sehatry ny fitaovana mandeha ho azy. Izy io dia afaka mamantatra ny herin'ny tselika sy ny axial rehefa mamantatra ny torsiany. Ny rindranasa manokana dia misy: mavesatra torque dizitaly, biriky herinaratra niomerika, valizy mihidy valiha mihidy, sns.
Shenzhen XJCSENSOR Technology Co., Ltd. (XJCSENSOR) dia naorina tamin'ny taona 2009 miaraka amin'ny faritra 4000 m2. XJCSENSOR dia manana foibe ao SZ. CN, ary manana birao any Suzhou, Hong Kong & Alemana.
Izay nataonay tamin'ny taona 2020
Manoloana ny "fanombohana sarotra" nateraky ny valanaretina tamin'ny taona 2020, ny indostrian'ny famokarana an-trano any Shina dia voadona hatrany, ary nanjary nalaza ny fahasarotana amin'ny famerenana ny asa sy ny famokarana. Taorian'io valanaretina io, ny industa mpamokatra elektronika indust ...
Ahoana ny fomba hijerena ny fahombiazan'ny sensor an'ny hery
Ny tanjon'ny fitsapana ny sela entina dia ny fametrahana ny fifandraisana misy eo amin'ny halehiben'ny sandan'ny hery sy ny sandan'ny signal output. 1) Vatan'ny fandrefesana hatramin'ny fihaonambe iraisampirenena momba ny metodolojia faha-11 tamin'ny taona 1990, ny firenena manerantany dia manana fahombiazana ...
Febroary 2021 XJCSENSOR sensor multi-axis famoahana vokatra vaovao
Nanomboka tamin'ny Febroary 2021, XJCSENSOR dia namoaka karazana sensor sensor axis multi-axis vaovao mba hanampiana ny fampandrosoana ny indostria 4.0 ho an'ny famokarana manan-tsaina mandeha ho azy. Indostria 4.0 dia ny mahatsapa ny mandeha ho azy manan-tsaina ny harena voajanahary avy amin'ny fampandrosoana, colli ...